Ọrụ Fedora: Ịmara obodo gị na mmepe ya ugbu a Site na Linux
Linux Post Wụnye | 13/09/2021 06:00 | Nkesa, GNU / Linux
na Eluigwe na ụwa nke ọrụ efu na mmeghe nke gbara gburugburu GNU / Linux na Ngwanrọ efu na obodo mepere emepe, enwere nnukwu ọrụ dị iche iche na -apụta maka ọtụtụ isi ihe bara uru. Dịka ọmụmaatụ, n'ọhịa nke GNU / Linux nkesa / obodo kwụpụta Debian, Ubuntu, Mint, Arch na n'ezie, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ Fedora.
Ma ọ bụ na, n'ime amaara "Ọrụ Fedora" enwere nnukwu na nzuzu Obodo raara onwe ya nye nke ukwuu ngwaahịa na akụrụngwa maka ndị mmadụ n'ụwa niile. Na na post a anyị ga -eleba anya na ọtụtụ n'ime ha.
Ma ebe ọ bụ na ọ bụghị nke mbụ anyị na -emeso ozi akọwapụtara nke ọma "Ọrụ Fedora", anyị ga -ahapụ ozugbo n'okpuru ụfọdụ njikọ kacha ọhụrụ gbasara nke anyị gara aga metụtara posts. Ka ndị nwere mmasị inyocha ha mgbe ha dechara akwụkwọ a nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe:
"Ewepụtala ụdị kwụsiri ike nke Fedora 34 ma dị njikere maka nbudata. Fdị ọhụrụ Fedora 34 a gụnyere usoro ndozi ama ama nke kwesiri ka eburu n'uche, ebe ọ bụ na ọtụtụ mgbanwe metụtara mmelite arụmọrụ yana ọkachasị na ngwaike.
Dịka ọmụmaatụ: ebugharịla iyi ọdịyo niile na sava mgbasa ozi PipeWire, nke bụzi ndabara kama PulseAudio na JACK. Na mgbakwunye na PipeWire nke dị elu n'ọtụtụ akụkụ, a na -eburu n'uche iji Wayland." Emeelarị Fedora 34, mara ihe dị ọhụrụ
Hasdị beta nke Fedora 34 ewepụtala ma ndị a bụ akụkọ ya
1 Ọrụ Fedora: Community Community na Platform Software
1.1 Kedu ihe bụ Fedora Project?
1.2 Kedu mmepe na akụrụngwa ị na -enye ugbu a?
1.2.1 Isi ọrụ
1.2.2 Mmemme na -apụta apụta na akụrụngwa ndị dịnụ
Ọrụ Fedora: Community Community na Platform Software
Kedu ihe bụ Fedora Project?
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na "Ọrụ Fedora", a kọwara ya nkenke dị ka:
"Igwe eji eme ihe, igwe ojii na arịa ọhụrụ, nke na -emepe emepe, nke na -emepe emepe, nke na -enyere ndị mmepe ngwanrọ na ndị otu obodo aka idozi ụzọ omenala maka ndị ọrụ ha."
Mgbe, ka oge na -aga, ha na -agbasawanye nke ha nkọwa na oke dị ka ndị a:
Ọrụ Fedora bụ obodo nke ndị mmadụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wuo sọftụwia sọftụwia na-emepeghị emepe, yana imekọ ihe ọnụ na ịkekọrịta azịza nke onye ọrụ wuru n'elu ikpo okwu ahụ. Ma ọ bụ, n'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -emepụta sistemụ arụmọrụ ma mee ka ọ dịrị gị mfe iji ya mee ihe bara uru.
Kedu mmepe na akụrụngwa ị na -enye ugbu a?
N’etiti ọtụtụ oru na ihe ndi di ugbu a, ọ bara uru ịkọwapụta na ịkọwa nkenke ihe ndị a:
Ọrụ Fedora: Ọ bụ sistemụ arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, dị ike ma dịkwa mfe maka laptọọpụ na desktọpụ. Emepụtara ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma maka ọtụtụ ndị mmepe, site na ndị na -enwe mmasị na ụmụ akwụkwọ ruo ndị ọkachamara na gburugburu azụmahịa. Ọ na -enye GNOME 3 Desktop Environment yana nchịkọta ngwaọrụ mepere emepe zuru oke.
Fedora Server. N'etiti njiri mara ya bụ nnukwu modularity (njikwa ụdị ngwa na asụsụ etinyere).
Fedora IoT (ịntanetị nke ihe): Ọ bụ mbipụta Fedora nke na -enye ntọala siri ike maka gburugburu ebe obibi IoT. Ọ dị mma maka ọrụ metụtara ụlọ, dị ka ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, obodo mara mma ma ọ bụ nyocha ya na AI / ML. Tụkwasị na nke a, ọ na-enye usoro ikpo okwu mepere emepe tụkwasịrị obi nke a ga-ewu ntọala siri ike ma dịkwa mfe nkwalite.
Mmemme na -apụta apụta na akụrụngwa ndị dịnụ
ndị ọzọ oru ngo na akụrụngwa ndị dị bụ:
Wiki: Ngwa mmekorita maka nnukwu obodo gị.
magazine: Ihe ọmụma na webụsaịtị akụkọ maka obodo gị.
Nbudata Alt: Ngalaba na -enye ụdị Fedora ọzọ.
Ngwa: Ngalaba na -anakọta, na -eme ka etiti ma na -enye akwụkwọ ọrụ niile dị mkpa.
Mpụ: Ọrụ nke na -enye Mbipụta (Spins) nke Fedora na gburugburu Desktọpụ na -abụghị GNOME.
Edolọ nyocha Fedora: Ngalaba na-enye nhọrọ curated nke ọdịnaya nwere ebumnuche na ngwugwu ngwanrọ, dị ka ndị otu Fedora na-elekọta ma na-elekọta ya.
CoreOS: Sistemụ arụmọrụ pere mpe, yana mmelite akpaka ma dabere na arịa. Ebumnuche ha bụ ịnye ndị ọbịa akpa kacha mma iji mee ka ibu ọrụ juru eju n'udo na n'ọkwa.
Silverblue. Ọdịiche a nke Fedora Workstation na -elekwasị anya na ndị mmepe.
Cheta na: Na post ọzọ anyị ga -enyocha ntakịrị ihe Fedora Silverblue.
Na nchịkọta, dịka enwere ike ịhụ, ugbu a bụ "Ọrụ Fedora" bụ ihe na -aga nke ọma nke a ọmarịcha obodo ndị ọrụ, ndị mmepe na ndị ọkachamara ndị ọzọ, ndị mepụtara ọmarịcha mmepe na emepe emepe, yana akụrụngwa ịntanetị na -enye aka maka onye ọ bụla chọrọ ma chọọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ọrụ Fedora: Ịmara obodo gị na mmepe ya ugbu a
Na fedora a pụrụ ịdabere na ya, ọ ga -abụ na ọ bụghị. Ịtụkwasị obi n'ihe gbasara nchekwa, n'ezie ọ bụ. Mana ọ dị nwute na nkwụsi ike, n'oge na-adịghị anya ọ ga-akụda gị wee nye gị nnukwu nsogbu, n'ihi na ha dị oke nkọ dị ka arch na mgbe ị na-atụghị anya ya ọ ga-agbaji ma ọ bụrụ na ọ bụrụ. Fedora bụ nkesa kachasị amasị m, yana nnukwu ọmarịcha ahụ na ọ nweghị gnome ọzọ dị ka ya na ụwa Linux niile. Mana ebe ọ bụ na ọ na -emecha mebie, anaghị m eji ya. Kama nnwale debian, n'eziokwu ọ bụ nnukwu amabeghị na ndị mmadụ kwenyere na n'ihi na a na -akpọ ya ịnwale, ọ na -agbaji gị, n'ezie ọ na -anwale, hahaha, ọ bụrụ na ọ na -anwale mana ha na -echekwa nke ọma karịa fedora, arch na ọbụna nri. . Enyochala ngwugwu ndị na -abịa nnwale ma ọ bụrụ na ha nwere ike nye gị obere nsogbu, mana ọ nweghị ihe siri ike na ị ga -etinyerịrị site na isi, belụsọ na ijiri kde na nvidia wee ee, ọ ga -akụ gị n'ezie. Anọ m na nnwale ruo afọ 3 na ọ bụ nkesa nyere m obere nsogbu, ọkachasị, nsogbu efu, enwere m nsogbu karịa na debian siri ike ma sie ike karịa ịnwale. Fedora agbajiri, arch ma ọ bụ gwa gị na manjaro na -agbajikwa. Nnwale Debian, anaghị agbaji, nkwụsi ike n'ụdị ya kacha dị ọcha.
Ekele, Testingsi. Daalụ maka nkọwa gị na ntinye sitere na ahụmịhe gị na Nnwale Fedora na Debian.
Onye ọ bụla jiri Fedora n'ime afọ ise gara aga maara na ha enweghị ihe ọ bụla ga -emere Debian anyaụfụ na nkwụsi ike na n'ezie Arch n'inwe sistemụ emelitere. Ọzọkwa, teknụzụ dị oke ọnụ, nke bụ ndị a na-agụta, dị na mbụ ma ọ bụ ka mma na Fedora karịa na Arch, n'ihi ntakịrị ihe kpatara na ha si na Fedora. Nkwupụta gị enweghị ihe jikọrọ ya na akụkọ ahụ ma eleghị anya ị banyere naanị iji kpasuo mmụọ iwe. Fedora Workstation kwụsiri ike dị ka debian na -enweghị oge ochie yana ọgbara ọhụrụ dị ka arch na -enweghị nkwụsị
Isiokwu a dị oke mma na m na -atụ anya nyocha nke fedora silverblue.
A bụ m onye ọrụ Fedora Workstation na onye ọrụ Silverblue. Abụ m onye bụbu onye ọrụ debian, openSUSE, Ubuntu, manjaro, arch, kwenyesiri ike na taa, Linux distro kacha mma bụ: Fedora Workstation
@Testingsi, nnwale Debian bụ nke amabeghị, ekwenyere m: ndị mmadụ na -eji ya n'amaghị nkọwa ya. Ọ bụrụ na ị na -ekwu maka ezigbo nchekwa na Fedora, ọ bụghị nkwụsi ike, nnwale Debian na -ata ahụhụ n'ihi enweghị ha abụọ, n'otu aka, mmelite nchekwa na -abịa * opekata mpe * otu izu ka emechara nke ọma (mụọ akwụkwọ ntuziaka na usoro mmegharị nke nchịkọta na nnwale), yabụ ị nwere ike nọrọ ọnwa ole na ole zuru oke na Firefox kubie ume ma ọ bụ ngwugwu ọ bụla dị mkpa mebiri n'ihi amụma mmelite ya, ị nwere ike ịme pinning ma ọ bụrụ na enweghị ụdị mbipụta, anyị amatalarị nsogbu njikọta nke nsụgharị na -eweta na ụdị mmepe ngwanrọ efu. .
Ekele, Autopilot. Daalụ maka nkọwa na ntinye gị.
Ha hụrụ ọghọm dị na Ghostscript nke emere site na ImageMagick